Ndị na-emepụta ihe nkiri na-emekọrịta mmiri | Akwa mmiri mmiri
15cm tụgharịa matraasi
20cm tụgharịa matraasi
25cm tụgharịa matraasi
Akwa ụfụfụ nkịtị
Banyere Mmemme Sywin
Ahụhụ ụra na-ehi ụra
Houselọ n'otu n'otu
Ihe omuma nke ihe omuma
Ntụziaka ịzụta ego
Ụlọ ọrụ Synwin matraasi na-emepụtakarị matraasi mmiri, akwa akwa akwa na akwa mmiribonnell mmiri matraasi na China. Gịnị mere họrọ anyị.
15 afọ ihe mmepụta ihe ①
Ahụmịhe afọ 15 na ịme akwa akwa na ngwa ngwa.
30000 PCS Mpụta kwa ọnwa ③
30000 PC mmepụta kwa ọnwa, ọkọnọ siri ike, nnyefe ngwa ngwa
Ahụmịhe Mbupu 100%. ⑤
Synwin matraasi ihe karịrị afọ 14 nwere ahụmahụ mbupụ gaa na gburugburu ụwa, na-aga ngosi kwa afọ dị ka Canton Fair, CIFF furniture ngosi,
② 70% RAW ihe US mere
70% akụrụngwa mere anyị, karịsịa maka afọ 32 ahụmahụ na mmiri usoro
④ 80000 M2 AKWỤKWỌ ELU
Anyị factory nwere n'elu 80000 square mita, hụ na matraasi kwa ọnwa ike ọkọnọ.
⑥ ODM na OEM
Nye atụmatụ ODM na OEM na otu nkwụsị ọrụ.
]Ọnụ ahịa nke adịchaghị
]Emepụtara ha niile dịka ụkpụrụ mba ụwa siri sie ike. Ngwaahịa anyị enwetala ihu ọma site n'ahịa ụlọ na nke mba ọzọ.
Ha na-ebupụ ugbu a n'ọtụtụ ebe na mba 200.
]Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
]Ụlọ ihe ngosi
]Ikpe ịga nke ọma
Dị ka ọkachamaraNdị na-emepụta matraasi China, Synwin, na-enyematraasi omenala, akpa mmiri matraasi, bonnell mmiri matraasi,na-aga n'ihu mmiri matraasiwdg.
Synwin, ndị na-ebu akwa matraasi ndị ọkachamara - Matraasi anyị na-ejikarị maka ụlọ ahịa na-ere ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, onye na-ere ahịa, onye nkesa na ọrụ nkwari akụ kpakpando wdg.
Ahịa ụlọ ọrụ 100% - Ọ nweghị ndị etiti na-eme ihe dị iche, chekwaa ọtụtụ ọnụ ahịa ma nyere gị aka inweta ọnụahịa asọmpi karịa.
15 afọ nkwa nke mmiri usoro, Karịrị nkasi obi. Ezigbo ụra abalị na-amalite na akwa akwa kwesịrị ekwesị.
Foto imewe efu maka ndị ahịa n'ịntanetị, nyere gị aka ịzụ ahịa ngwa ngwa.
]RSB-PT23, Bonnell mmiri n'ụlọ na-eji ohiri isi
]RSP-BT26, mpịakọta mmiri mmiri n'ime igbe
]RSP3-ETM25.5 ebe nchekwa ụfụfụ akpa akwa mpịakọta
]RSB-R22 Bulie bonnell mmiri matraasi n'ịntanetị
]RSP-ETL28 Natural latex nkwari akụ akpa mmiri
]RSB-2BT Akụkụ abụọ na-eji akwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ latex+memory foam
]RSP-2S Economic online ODM mmiri matraasi
]RSB-B21 Bugharịa n'ime igbe siri ike n'elu akụkụ abụọ ejiri matraasi mee ihe
Mbelata 2000$USD maka 40HQ, zipu ajụjụ Ugbu a!
]Anyị enyela OEM / ODM nrụpụta ọrụ maka afọ 25. N'agbanyeghị ihe ị chọrọ, ọtụtụ ihe ọmụma na ahụmahụ anyị na-emesi gị obi ike na ị ga-arụpụta ihe na-eju afọ. Anyị na-etinye mgbalị kachasị ike iji nye ezigbo mma, ọrụ afọ ojuju, ọnụahịa asọmpi, nnyefe oge nye ndị ahịa anyị bara uru.
Anyị enyela OEM / ODM nrụpụta ọrụ maka afọ 25. N'agbanyeghị ihe ị chọrọ, ọtụtụ ihe ọmụma na ahụmahụ anyị na-emesi gị obi ike na ị ga-arụpụta ihe na-eju afọ. Anyị na-etinye mgbalị kachasị ike iji nye ezigbo mma, ọrụ afọ ojuju, ọnụahịa asọmpi, nnyefe oge nye ndị ahịa anyị bara uru.
Synwin mmiriemeputa matraasi , kemgbe 2007, emi odude keFoshan, China. A na-ebupụ anyị matraasi n'elu afọ iri na ise. Dị kamatraasi omenala,akwa akwa mmiri,bonnell spring matraasi,akpa mmiri matraasi na nkwari akụ wdg. N'otu oge ahụ, dị ka omenalandị na-eweta matraasi, Ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịnye gị matraasi nke omenala, kamakwa ị nwere ike ịkwado ụdị ewu ewu dị ka ahụmahụ ahịa anyị si dị. Matraasi anyị na-ejikarị maka ndị na-ere ahịa, ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa, ụlọ ahịa, ndị ahịa n'ịntanetị na ụfọdụ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ wdg.
Anyị na-etinye onwe anyị n'ịkwalite azụmahịa matraasi gị. Ka anyị tinye ọnụ n'ahịa ọnụ. Matraasi Synwin na-aga n'ihu n'ahịa asọmpi. Anyị nwere ike na-enye OEM / ODM matraasi ọrụ anyị ahịa, anyị niile mattresses mmiri nwere ike na-adịgide adịgide maka 15 afọ na ọ bụghị ala.
]2021 akwa akwa akwa akwa akwa ọhụrụ na-abịa
]Ohiri isi ọhụrụ na-ebipụta
]Jiri igwe mpịakọta mee ihe
]3zones akpa isi iyi mmiri n'ụlọ nkwakọba ihe
Onye mmekọ SYNWIN
Dị ka China 15 afọ emeputa matraasi, Synwin na-enye ndị ahịa zuru ụwa ọnụ mma kacha mma na ọnụahịa ụlọ ọrụ asọmpi,
Enyere ndị na-ebu ihe matraasi Synwin nkwado dị elu site n'aka ndị ahịa ya si n'ime ma n'èzí. Anyị na-anabata matraasi omenala, nha ọ bụla, mmefu ego ọ bụla, ụkpụrụ ọ bụla dị. Ngwa na-enye Synwin maka ụlọ Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland na ụdị mba ụwa ndị ọzọ ama ama karịa afọ 4. àgwà ngwaahịa bụ nke ukwuu ghọtara site ahịa anyị.
]5 Star Hotel
]Ndị na-ere ahịa 100 zuru ụwa ọnụ
]Ụlọ ahịa arịa kacha elu na ụlọ ahịa matraasi
]Weebụsaịtị ịzụ ahịa n'ịntanetị
]Ndị na-ere ahịa Amazon
Synwin nwere ike imepụta matraasi omenala, akwa akwa mmiri, akwa akwa mmiri bonnell na akwa mmiri na-aga n'ihu,akwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ etc. Ebe a na-enye gị anyịemeputa matraasi ozi ụlọ ọrụ, matraasi ọhụrụ imewe, ọhụrụ ụkpụrụ, nandị na-eweta matraasi ozi ọhụrụ. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ mmeghe ụlọ ọrụ anyị, omenala ụlọ ọrụ, otu ndị na-ere ahịa, na ezigbo ihe ngosi ngwaahịa.
Dị na-agụ a nkeji iji nweta a ọsọsọ ịghọta nke Synwin!
]Gịnị bụ akwa akwa mmiri?
]Ụfọdụ aro ịzụrụ maka matraasi
]Kedu akwa akwa dị mma maka ụmụaka ihi ụra?
]Kedu ka esi ahọrọ akwa akwa akwa akwa akwa?
Ikwu okwu na anyị ugbu a,
Eleghị anya, anyị nwere ike inyere!
Ezigbo, m ga-asịkwa na 12 awa. All ozi gị na-echebe!
Chọta anyị Alibaba: swmattress.en.alibaba.com.
Uwe akwa akwa
Nyefee akwa matraasi
Gwa: +86-757-85519362/ +86 -757-85519325
Tinye: NO.39Xingye Road, Ganglian Industrial Mpaghara, Lishui, Nanhai Ditirct, Foshan, Guangdong, P.R.China
MMADỤ MMADỤ MMADỤ Azụmahịa
Kpọtụrụ Ahịa na SYNWIN.
Nwebiisinka © 2022 Synwin Mattress (Guangdong Synwin Non Woven Technology Co., Ltd.) | Ikike niile echekwabara 粤ICP备19068558号-3